News & Blog - စာမျက်နှာ2- Austin Partners in Education
ဆရာများသည်လူငယ်များ၏ဘ ၀ များတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတို့အားဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ကူညီခြင်းနှင့်အနာဂတ်အခွင့်အလမ်းများသို့ဆက်သွယ်မှုများပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ဇန်နဝါရီလ
ကဗျာ	ဇန်နဝါရီ 30, 2020
ကဗျာ	ဇန်နဝါရီ 24, 2020
သင့်ကိုကြီးပြင်းလာသူအားကူညီသူတစ် ဦး ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူတို့ကဆရာ၊ အိမ်နီးချင်း၊ မိဘ၊ လမ်းညွှန်၊ မိသားစုသူငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်နည်းပြဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်
ကဗျာ	ဒီဇင်ဘာ 16, 2019
ကဗျာ	နိုဝင်ဘာ 21, 2019
ကလေးဘဝတုန်းကဘာကိုကြောက်တာလဲ မင်းအိပ်ယာအောက်မှာရှိနေတဲ့အမှောင်ထုဒါမှမဟုတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နဂါးကိုကြောက်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ကောင်း
ကဗျာ	အောက်တိုဘာ 31, 2019
ပညာရေးဆိုင်ရာ Austin အပေါင်းအဖေါ်များ @austinpartners @austinpartners ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Cathy Jones မှ APIE မှစာသင်ခန်းအတွင်း ၂၀၁၁-၂၀၂၀ ကျောင်းပညာသင်နှစ်မှကြိုဆိုပါသည်။ ယနေ့မှတ်ပုံတင်ပါ! စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်
ကဗျာ	စကျတငျဘာ 3, 2019
မင်္ဂလာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကျေးဇူးတင်လေးမြတ်လ! ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများအားကျွန်ုပ်တို့အစဉ်အမြဲကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းမရှိရင် APIE … APIE! မင်းကိုယူတဲ့အခါငါတို့ကျောင်းသားတွေကြိုက်တယ်
ကဗျာ	ဧပွီ 30, 2019 ပွီ
မတ်လနွေ ဦး နှုတ်ခွန်းဆက်စကား
ကဗျာ	မတ် 28, 2019